Qalabka ay isticmaalaan dadka nefta qaba oo "sababa isbeddelka cimilada" - BBC News Somali
Qalabka ay isticmaalaan dadka nefta qaba oo "sababa isbeddelka cimilada"
31 Oktoobar 2019
Neef-qabatinka ayaa la rumeysan yahay inay saameyso ku dhowaad 340 milyan oo qof guud ahaan dunida
Dad badan oo neef qaba ayaa yareyn kara hawada carbon-ka ee ay adeegsadaan isla markaana badbaadin kara deegaanka, iyagoo ku beddelaya daawooyiin kale oo aanan deegaanka waxba u dhimeynin, sida ay sheegeen baarayaasha UK.
In is beddelkaas la sameeyo ayaa ah mid saameyn leh, si la mid ah inuu qofku beddelo cuntadiisa oo uu khudaar ku beddelo.
Sababta waxay tahay in inta badan qalabka hawada laga qaato ay sii daayaan gaaska hawada wasaqeeya oo lala xiriiriyay kululaashaha cimilada.
Dhibaatada uu qalabkaasi dunida ku hayo
Neef-qabatinka ayaa la rumeysan yahay in ay qabaan ilaa 340 milyan oo qof guud ahaan dunida, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay dallad ay ku mideysan yihiin dadka xanuunka neefta qaba.
Baarayaasha Cambridge University ayaa baaritaan ku sameeyay daawo kale oo loo qoray bukaanno ku sugan England.
Sannadkii 2017-kii, ilaa 50 milyan oo qof oo isticmaala qalabka hawada laga qaato ayaa laga diwaan geliyay dalkaas. Tobankii qofba toddoba ka mid ah ayaa isticmaala qalabka PMDIs - oo ah nooca uu ku jiro gaaska qiiqa badan.
Dhaqaatiirta oo ku talinaya in Malabka lagu daweeyo qufaca
Daraasad: Dawooyinka dhiig-karka oo la ogaaday iney wanaagsan yihiin habeenki in la qaato
Gaaska hydrofluoroalkane - ayaa loo adeegsadaa inuu daawada ka soo saaro qalabkan hawada laga qaato, waxaana aad looga isticmaalaa guud ahaan dunida, maaddaama uu ka rakhiisisan yahay budada qallalan ee loo isticmaalo in hawada laga qaato.
Daraasad ayaa muujisay in qalabkan uu sii deyn karo hawada carbon ee uu sii daayo gaari safar ku galay masaafo dhan 290km
Maxaa isbeddel ah oo ay sameyn kartaa dawada cusub?
Baarayaasha Jaamacadda Cambridge ayaa sheegay in dawada cusub oo lagu beddelo qalabka neefta laga qaato ay yareyn karto hawada carbon dioxide ee dalkaasi England, halkaas oo in ka badan shan milyan oo qof ay qabaan xanuunka neef-qabatin.
In qalabka hawada laga qaato lagu beddelo mid cusub oo aan deegaanka wax u dhimeyn ayaa la mid ah inaad iska deyso cunitaanka hilibka
Dhib miyay leedahay in loo beddesho dawada cusub?
Si kastaba, Khubarrada ayaa sheegaya in dadka u baahan qalabkan neefta laga qaato ay sii wadi karaan isticmaalkiisa.
In loo beddesho qalab kale oo cusub oo hawada laga qaato ayaa dhibaato ku keeni kara dadka qaba neefta, iyagoo u baahan inay la qabsadaan, waxaana lagula taliyay inay caawinaad ka helaan dhaqaatiirta.
In loo beddesho qalab kale ayaa dhib ku noqon karta bukaannada maaddaama a la qabsi u baahan tahay
Dr Wilkinson ayaa ugu baaqay bukaannada aanan beddeli karin dawada ay hadda qaataan inay sii wadaan, balse ay weli ka fekeri karaan sidii ay deegaanka u ilaalin lahaayeen.
"Runtii waa muhiim inaan qalabka hawada laga qaato u isticmaalno si taxadar leh," ayuu yiri.
Kansarka xaniinyaha oo daawo cusub loo helay
21 Disembar 2016
Bukaan madow ah oo lagu xirey tuhun ah in uu soo xaday qalabkii uu neefta ka qaadanayay
2 Luulyo 2019
10 Maajo 2021
Dhageyso, "Waan ku hungoownay soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo Kenya"
Hindiya waxaa korona u wehliya cudur indhaha tiraya bukaannada
Wax ka ogow masjidka Al Aqsa ee ay ciidammada Israa'iil xoogga ku galeen
Ciidammada Itoobiyaanka ee magangalyada waydiistay dalka Sudan
'Covid19 ayay si sharci darro ah uga macaashi rabeen balse waa lagu fahmay'